YAANYADA LAGU BEERAY BIYO KARKARAYA: MAXAA LOO BAAHAN YAHAY, OO NOOCYO KALA DUWAN OO YAANYO AH AY KU HABBOON YIHIIN HABKANI ASAASIGA AH, SIDEE BUU DAAWEYNTA ABUURKU U SHAQEEYAA INTA LAGU GUDA JIRO BEERTO? - BEER CAGAARAN
Habka asalka ah ee beerto tamaandho biyo karkaraya: laba hab oo beereed, doorasho noocyo yaanyo ah iyo daryeel dheeraad ah
Tamaandho waxay ku koraan qiyaastii guri kasta. Iyadoo dhamaadka jiilaalka, bannaanka u soo baxaan su'aasha: in ay u koraan geedo yaanyo on ay u gaar ah ama si ay u iibsadaan geedo diyaarsan.
Waayo, is-saariddu waxay u baahan tahay dulqaad iyo xaddi xaddidan oo waqti go'an ah. Waxaa intaa dheer, had iyo jeer ma aha natiijada in lagu guuleysan karo guusha. Laakiin waxaa jira habab beerto tamaandhada, oo had iyo jeer bixiso biqilka wanaagsan. Tani waxay ku beeraneysaa biyo karkaraya.
Laba siyood oo lagu beeray biyo karkaraya
Waxaa jira labo siyaabood oo yar.
Sida ugu horeysa.
Carrada ay tahay in la beero abuurka waa in lagu daadiyaa biyo karkaraya.
Ka dib markaa, abuurka yaanyo waxaa la dhigaa dhulka, ma xitaa aadan ku rushayn kartaa dusha sare.
Marka xigta waxaad u baahan tahay inaad daboosho filinka beeridda, ka ilaalinta qabowga.
Qaabka labaad wuxuu ka duwan yahay in miraha u baahan yihiin in lagu mastaafuriyo dhulka qalalan, ka dibna ku shub biyo karkaraya.
Ka dib markii la waraabiyo, waxaad u baahan tahay inaad daboosho geedo mustaqbalka leh filim iyo ku rid meel diiran.
Saldhigga labadan qaab ayaa ah saamaynta qubeyska kulul. Sidaa darteed, lagu koriyo oo loo baahan yahay in lagu daboolo filim ah si ay u hayso qoyaan diiran oo qoyan, kaas oo la abuuray sababtoo ah biyo karkaraya.
Biyo kulul waxay sidoo kale ka caawisaa kicinta biqilka abuurka yaanyo.
Tamaandho lagu beeray biyo karkaraya, waa la yaabay, taas oo ay tahay tan, ma aha oo kaliya biqilka, laakiin sidoo kale geedi socodka barafaysan ayaa la dedejiyey.
Baadhitaanno badan ayaa muujiyay in caleemaha ugu horreeya waa inay muuqdaan maalinta saddexaad.
Habka lagu beerayo biyaha karkaraya waa mid cusub, laakiin wuxuu horay u leeyahay tiro taageerayaal ah. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in qaabkani runtii ku siinayaa natiijo wanaagsan. Tani waa wejiga ugu weyn.
Faa'iidooyinka ka mid ah soo degidda waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
dhul daadan oo biyo kulul ah kuma jiraan cuduro kala duwan;
habka uu ku habboon yahay abuurka miraha wax soo saarka;
marka laga reebo xaqiiqda ah in 100% biqilka la filayo, abuurka u baahan qufuc dheer oo kori doona si dhakhso ah.
Waa muhiim. Iibso abuurka waa in lagu sameeyaa dukaanka khaaska ah, haddii kale dhammaan dadaallada lagu korinayo geedo waxay noqon karaan kuwo la wareersan.
Faa'iido la'aanta isticmaalka biyaha kulul ee biqilka ee yaanyada waxaa ka mid ah xaqiiqda ah in miraha la jaray. Tani waxay saamaysaa qaab-dhismeedka geedka mustaqbalka. Qofna ma saadaalin karo in miraha yaanyadu koraan biyo karkaraya ay awoodaan inay soo saaraan dalag.
Waa maxay noocyadu ku habboon yihiin beeritaanka noocan ah?
Sida tababarku muujiyo, nooc kasta oo yaanyo ah ayaa la karbi karaa iyadoo la isticmaalayo habka aqalka dhirta lagu koriyo. Geedo waa xoog iyo caafimaad leh, tan iyo labadaba dhulka iyo abuurka ayaa horay loo kala saari jiray.
Tilmaamaha: sida loo beerayo yaanyada isticmaalaya biyo karkaraya?
Sida ugu horeysa. Dhulka dhulka, daadi biyo karkaraya.
U diyaari weel si aad horey u sii wado.
Biyaha waa in la keenaa karkariyo.
Ciidda ku jirta weelka waxaa lagu waraabiyaa biyo kulul. Biyaha waa in si fiican loo qoyno ciidda.
Ka dibna qaado miraha khudradda, oo waxoogaa yar u qoto dheer carrada diirran, dabool leh polyetylene.
Awoodda leh geedo ku rid batteriga 30-45 daqiiqo.
Kadibna ka saar batoonka oo loo wareejiyo qol diiran.
Qaabka labaad. Sameynta biyaha karkaraya hore loo beeray abuurka.
Xulo caag geedo mustaqbalka ee yaanyada.
Awoodda aan ku seexanno lakabka ciidda gaarka ah.
Seeds of yaanyada mustaqbalka waxaa la dhigay on dusha ciidda.
Geedo ku shubay biyo karkaraya. Khubarada waxay ku talinayaan in si toos ah looga waraabiyo kaadida.
Daboolka sare leh caag balaastig ah ama ku duudduub xirmo.
Marka hore, weelka waxaa la geliyaa batteriga 40-50 daqiiqo, ka dibna loo wareejiyo qol diiran.
Daawo fiidiyowga ku saabsan daaweynta biyaha la karkariyey ee hore loo beeray:
Ka dib markii laga beerto, waa lagama maarmaan in la sugo soo ifbaxa caleemaha. Inta lagu jiro muddadan, waxaad u baahan tahay inaad kormeerto kondensate-ka oo ka sameysan filimka. Haddii kale, markaa waa waqtigii biyo lagu koriyo.
Marka sprouts ugu horeysa ay bilaabaan inay dillaacaan, awoodda leh geedo waa in lagu wareejiyo iftiin dheeraad ah.
Waa muhiim. Waqtiga tufitaanka filimka ugu horeeya ee sprouts uma baahna in la saaro.
Sida ugu dhakhsaha badan caleemaha dhirta intooda badan, waa in laga saaro polyetylen.
Marka laga beerto, miraha way yar yahiin dhulka. Si loo sameeyo nidaam xidid adag oo u baahan in la aaso. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isla markiiba ku beeri kartaa geedo yar yar ee weelal gooni ah. Waxaad sidoo kale si tartiib ah ugu rusheeyaa carrada oo aad sameysid markaad dhirta sii xoogeyso.
Khabiiradu waxay ku talinayaan inaysan isticmaalin dhaymada kaddib marka la qaado. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in ciidda beerta aysan lahayn dhamaan sifooyinka dhulka korkiisa. Sidaa darted, hannaanka la qabsashada kadib dib u degitaanka wuxuu noqon doonaa mid dheer oo adag.
Beeridda doofaarka leh biyo karkaraya ayaa helaya caan weyn oo u dhexeysa beeraleyda. Si aad u dooratid hab lagu dabooli doono baahiyaha oo dhan, waxaad u baahan tahay inaad isku daydo. Waxaa intaa dheer, natiijadu waxay caddaynaysaa waxyaabaha laga filayo.